पूजा शर्माको गुनासो : ‘दारा निस्केको महानायिका’ भनेर पत्रकारले यति अशिष्ट शब्द बोल्न मिल्छ ? - Himali Patrika
पूजा शर्माको गुनासो : ‘दारा निस्केको महानायिका’ भनेर पत्रकारले यति अशिष्ट शब्द बोल्न मिल्छ ?
हिमाली पत्रिका २५ साउन २०७७, 8:08 am
यसरी नायिकाको अनुहारलाई लिएर मजाक गरेपछि सुवेदी आलोचनामा परेका हुन् । सुवेदीले नायिकाको नाम नलिए पनि उनको टिप्पणी पूजाप्रति लक्षित रहेको बुझ्न कठिन छैन ।
केही समयअघि उनले नै पूजाको एउटा अन्तरवार्ता लिएका थिए, जुन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । नेपालमा कतिवटा जिल्ला र प्रदेश छन् भन्ने प्रश्नको पूजाले सही जवाफ दिन सकेकी थिइनन् ।